Tithe.secular.and.god.principle.rev2 by Murann Ezine 694 views
New.life.ii.12.lessons by Murann Ezine 671 views
10 Ways to Spread The Love in The O... by Elodie A. 453979 views
1. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၈ : ၁ ၁ ယယယယ ၆ : ၁ ၅ -၂ ၀ ၂ ယယယ ၃ : ၃ ဧ ၁ : ၁ ၃ ယယယယ ၆ : ၄ ယယယယ ၃ : ၂ ၄ / ၄ : ၁ ၃ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ၆ ယ ၇ - ၁ ၁ ယယယယယ ၂ ယ ၃ ၇ -၃ ၈ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၃ ယ ၅ ။ ၆ ၁ ၄ ။ ၁ ၇
2. ၂ ၀ ယ ၂ ၂ ယယယ ၈ ယ ၉ ယယယယ ၃ ယ ၆ ယယ ၃ ယ ၅ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၅ ယ ၅ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၈ ယ ၁ ၄ . ၁ ၆ ယယယ ၄ ယ ၆ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ယယယယ ၁ ၂ ယ ၃
3. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ၅ ယ ၂ ၆ ၁ ၆ ယ ၁ ၄ . ၁ ၅ ယယယယ ၂ ယ ၁ ၀ .၁ ၁ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယ ၉ ယ ၂ ၀ ယယယ ၁ ၄ ယ ၁ ၆ .၁ ၇ ။ ၂ ၆ ၁ ၆ ယ ၁ ၃ .၁ ၄ ယယယယ ၂ ယ ၉ .၁ ၆ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၄ ယ ၁ .၃ ယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၁ ၂ ယ ၁ ၃
4. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ၁ ယ ၁ ၃ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၁ ၂ ယ ၁ ၃ ယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ မ ၃ ယ ၁ ၁ ယယ ၁ ယ ၈ ယယယ ၃ ယ ၁ ၆ ယယယ ၁ ယ ၃ ၃
5. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ယ ၁ ၅ ၊ ၄ ၁ ၊ ၆ ၇ တ ၂ ယ ၄ ၄ ယ ၈ ၊ ၃ ၁ ၆ ယ ၃ .၅ ၇ ယ ၅ ၅ ၁ ၁ ယ ၂ ၄
6. ၁ ၃ ယ ၉ ၊ ၅ ၂ ဧ ၅ ယ ၁ ၈ ယယယယ ၃ ၁ ယ ၃ ယယယယယယ ၁ ၄ ယ ၁ ၉ ယယယ ၁ ၀ ယ ၁ ၀
7. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ယ ၁ ၅ .၁ ၇ ၂ ၄ ယ ၄ ၇ .၄ ၉ တ ၁ ယ ၈ ၄ ယ ၃ ၁ ၆ ယ ၉ .၁ ၀ ၁ ၉ ယ ၆ ယယယ ၉ ယ ၁ .၃ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ
8. ယယ ၁ ၆ ယ ၁ ၇ .၁ ၈ ယယယယ ၁ ယ ၇ ၁ ၂ ယ ၇ .၁ ၁ ယယယ ၄ ယ ၁ ၀ .၁ ၁ ယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၂ ယ ၂ ၈ .၂ ၉ တ ၂ ယ ၁ ၇ .၁ ၈ ၁ ၀ ယ ၉ .၂ ၂ ယယယယ ၁ ၄ ယ ၁ .၅ ၁ ၄ ယ ၂ ၁ .၂ ၅
9. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ၌ ယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ၄ ယ ၁ ၇ ယယယယ ၁ ၃ ယယယ ၅ ယ ၂ ၂ .၂ ၃ ယယယယ ၁ ယ ၆ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ
10. ယယ ၅ ၁ ယ ၁ ၀ .၁ ၂ ၁ ၄ ၃ ယ ၁ ၀ ယယယ ၁ ၁ ယ ၁ ၉ .၂ ၀ ၃ ၇ ယ ၂ ၆ ယယယ ၈ ယ ၄ .၁ ၀ ၁ ၅ ယ ၁ ၆ ဂ လ ၅ ယ ၁ ၆ .၁ ၈ ယယ ၂ ယ ၁ ၂ .၁ ၃ ၂ ယယယ ၂ ယ ၁ ၃ ယယယ ၁ ယ ၂
11. ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၈ ယ ၂ ဧ ၃ . ၁ ၆ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ဧ ၆ ယ ၁ ၇ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယ မ ၁ ၀ ယ ၁ ၇ .၂ ၀ ယယ ၁ ၃ ယ ၁ ၁ ယယယ ၁ ၂ ယ ၁ ၁ .၁ ၂ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယ ယယယ ၁ ၄ ယ ၁ ၇ .၁ ၈ ၊ ၂ ၆ .၂ ၇ တ ၉ ယ ၃ ၁ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ
12. တ ၄ ယ ၂ ၃ .၂ ၄ ယယယ ၈ ယ ၂ ၆ ဧ ၆ ယ ၁ ၈ ယယယ ၁ ယ ၂ ၀ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၄ ယ ၂ ၃ .၂ ၄ တ ၁ ၀ ယ ၄ ၆ ဧ ၅ ယ ၁ ၈ . ၁ ၉ ယယ ၃ ယ ၃ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ
13. က ၆ ယ ၃ ဧ ၄ ယ ၃ ၀ မ ၁ ၂ ယ ၃ ၁ .၃ ၂ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယ ၁ ယ ၂ ၂ ၅ ယ ၅ ဧ ၁ ယ ၁ ၃ .၁ ၄ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၈ ယ ၂ ၃ ယယယ ၂ ၂ ယ ၂ ၀ ယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယ ယယယယယယယယယယယယယယယယယ ယယယ ၈ ယ ၁ ၁